လောင်းကစား — Steemkr
စွဲအမြဲလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မှပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရပြီ။ လူအတော်များများဟာအားနည်းချက်တွေ, အနာရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်ဆန့်ကျင်ပေါ်, အာရုံစူးစိုက်ရကျိုးနပ်မဟုတ်ဘူးတစ်ခုခုအဖြစ်ကသူတို့ကိုရှင်းပြဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ပြည်သူ့စှဲအများအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစားသုံးမှုချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းထင်လေ့; လူတိုင်းဥပမာအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲသတိထားဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကလည်းဒါပေါ်မှာအင်တာနက်စွဲအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပွဲ, ဗွီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, selfie စွဲများနှင့်လည်းရှိပါတယ်။ သူတို့အစားမကြာခဏသူတို့ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်အလေးအနက်ထားကြသည်မဟုတ်အဖြစ်ကောင်းစွာတဦးတည်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးရန်အလေးအနက်ခြိမ်းခြောက်မှု, ရှိုးပေမယ့်။ သူတို့တွင်လည်းဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည့်, စွဲလောင်းကစားသည်, detect နှင့်ဆက်ဆံဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အတိအကျအဘယ်အရာကိုစွဲလမ်းလောင်းကစားသည်, အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်အန္တရာယ်ဖြစ်စဉ်းစားသလဲ? ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, လောင်းကစားစွဲလောင်းကစားဝိုင်းတစ် compulsive လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ရံဖန်ရံခါလောင်းကစားဝိုင်းတစ်ခုစွဲမျှမက, , စနစ်တကျမကြာခဏနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလောင်းကစားဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ compulsive လောင်းကစားဝိုင်းမသက်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဘဏ္ဍာရေးအဆင့်အတန်း, မိသားစုရဲ့သဘောထား, သို့မဟုတ်အလုပ်-related ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်; တစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်းစှဲလမျးသူသူ / သူမပြီးသား, ဒေဝါလီခံကွာရှင်းနှင့်ပစ်ခတ်-လုံးဝသူ့ဟာသူလောင်းကစားများ၏လုပ်ရပ်များ၏စိတ်လှုပ်ရှားအဘို့ဖြစ်၏လျှင်ပင်လောင်းကစားလုပ်တဲ့ဖို့တိုက်တွန်းခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာလောင်းကစားအပေါ်အမေရိကန်အမျိုးသားကောင်စီအရ, သာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ, (Full-စကေးစွဲအဓိပ္ပာယ်) ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏စံနှုန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သူကိုသန်းနှစ်ခုကျော်ကလူရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါးကိုပိုမိုသန်းသူ၏လောင်းကစားဝိုင်းအလေ့အထများ "အဖွဈဖျောပွနိုငျ ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်း။
ဒါကြောင့် "ကျန်းကျန်းမာမာ" လောင်းကစားဝိုင်း (ကလောင်းကစားဝိုင်းလူတစ်ဦးအနက်အဓိပ္ပာယ်ပျော်စရာအဘို့မက, ဤလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရှိပြီး, လောင်းကစားဝိုင်းမှတဆင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်အခြားလူများထိခိုက်ဘယ်တော့မှတစ်ဦးကငွေဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်ရောက်ရှိသောအခါများသောအားဖြင့်ရပ်တန့်, ဒါမှမဟုတ်အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော) ရှိသည် ဖြစ်. , compulsive လောင်းကစားဝိုင်းသည်ရှိ၏, အဆုံးစွန်သောမဟုတ်ဘဲတိကျစွာကရှာဖွေရေးမှာခွင့်ပြုထားတဲ့ attribute တွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဤရွေ့ကား attribute တွေနေသောခေါင်းစဉ်: အဆက်မပြတ်လောင်းကစားဝိုင်းစဉ်းစား, သို့မဟုတ် (ခိုးမှုနှင့်လိမ်လည်မှုအပါအဝင်) အလောင်းအစားဖို့ပိုပိုက်ဆံကိုရှာဘယ်မှာအကြောင်းကို; လောင်းကစားဝိုင်းကိုဆက်လက်ပိုက်ဆံများအတွက်အခြားလူများတောင်းဆိုနေတာ; ပျောက်ပိုက်ဆံ recover လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုအတွက်လောင်းကစားဝိုင်း; အလားတူပစ္စည်းဥစ္စာစွဲဖို့, တစ်ဦးရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားအတူတူပင်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားရရန်ငွေကိုတပ်တိုးမြှင့်ပမာဏလိုအပ်တယ်; လောင်းကစားဝိုင်းအများအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့စိုးရိမ်ပူပန်အပြစ်ရှိတယ်စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်ခက်ခဲခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြု၏, သို့မဟုတ် (အဖြစ်ကောင်းစွာလောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာအပါအဝင်) တည်ဆဲပြဿနာများမှအာရုံရရန်, တဦးတည်းရဲ့လောင်းကစားဝိုင်းများ၏အကြေးခွံအကြောင်းကိုတဦးတည်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေမှလဲလျောင်း, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နှိုက်ကလောင်းကစားများ၏တကယ်တော့အကြောင်းကို; ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောင်းကစားဝိုင်းဤမျှအပေါ်အဖိုးတန်ဆက်ဆံရေးကို, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ, ဂုဏ်သတင်းနှင့် (MayoClinic) ဆုံးရှုံး။
အဲဒါကိုမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်, လောင်းကစားစွဲမဆိုကြင်နာဘို့မဟုတ်ဘဲပုံမှန် attribute တွေပိုင်ဆိုင်ဒါကြောင့်နောက်ကွယ်တွင်ရပ်နေသည်ကိုအကြောင်းပြချက်ကိုလည်းစွဲလမ်းအပြုအမူမြားဖြစ်စေတဲ့အခြားပုံစံများနှင့်ဆင်တူလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်, လောင်းကစားဝိုင်းစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ခံစားချက်များကိုအနေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထွက်ပေါက်ကိုကူညီမည် တစ်ဦးလောင်းကစားသမားချက်ချင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် Self-လေးစားမှု, ဂုဏ်သတင်း, ငွေကြေးအဆင့်အတန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း, အသက်တာ၌အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုပြီးမြောက်၏အာရုံခံစားမှုရရှိအရှင်, ပိုက်ဆံ၏သိသာထင်ရှားသောပေါင်းလဒ်အနိုင်ရတဲ့၏အိပ်မက်မက်လိမ့်မည်။ သာမန်အဖြစ်မှန်ကနေထွက်ပြေးလာသူကိုလည်းလောင်းကစားသမားများ၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်မည်အကြောင်း, ရံဖန်ရံခါအမှန်တကယ်ကဒီတစ်ခုသက်သာချောင်ချိရေး၏ထင်ယောင်ထင်မှား, ဇိမ်ခံနှင့်အထက်တန်းလွှာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှပိုင်ဆိုင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်-အားလုံးပိုက်ဆံအနိုင်ရသူတွေကိုဝိုင်းရံခံရတောက်ပကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, အသံကျယ်အကြွေစေ့ကစားရုံ။ ဒါကြောင့် (စိတျလှုပျရှားစရာသို့မဟုတ်သာယာသောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်သူတို့ဖြစ်ပေါ်စေ "အသက်၏အရသာ" အဓိပ္ပာယ်) စိတ်လှုပ်ရှားဘို့ကြည့်ဖို့လူ့သဘောသဘာဝ၌တည်ရှိ၏အဖြစ်သို့မဟုတ်, လောင်းကစားဝိုင်းမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုအရင်းအမြစ်အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ တစ်ဦးထီပေါက်ကြိုမြင်ပြီးတစ်ဦးလောင်းကစားသမားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝ "မြင့်သော" မသိပ်ကွဲပြားခြားနားသောဝတ္ထုများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တကနေဖြစ်စေတဲ့အပျော်အပါးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှား (ဥပမာ dopamine နှင့် adrenaline,) တာဝန်ရှိသည်ဟော်မုန်းပမာဏထုတ်လုပ်သည်။ အပြင်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းထိုကဲ့သို့သောအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအဖြစ်စွဲလမ်း၏အခြားပုံစံများ, ထက်အများကြီးပိုလောင်းကစား tolerates ။ တကယ်တော့, လောင်းကစားဝိုင်းမကြာခဏတစ်ခုခုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြစ်ရှုမြင်ပေမယ့်အန္တရာယ်မပေးနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာနှင့်ကြော်ငြာအေဂျင်စီသာလောင်းကစားဝိုင်းမှချိတ်ဆက်နေတဲ့ဖက်ရှင်နဲ့စတိုင်အသက်တာ၏ရုပ်ပုံများကိုထုတ်လုပ်, ဒီပုံရိပ်ကိုအထောက်အကူပြုလျက်ရှိ၏ မှတပါး, ၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်အတူကတ်များသို့မဟုတ်ဘင်ဂိုကစားကစားနေဖြင့်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲအစောပိုင်းအသက်အရွယ်-ဥပမာမှာလောင်းကစားဝိုင်းမှများစွာသောလူငယ်များမိတ်ဆက်ရ; ဤအကမိသားစုလှုပ်ရှားမှုများမဟုတ်ဘဲအပြစ်မဲ့ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကလည်းလူငယ်တစ်ဦးလူတစ်ဦးတစ်ချိန်ချိန် (HealthyPlace) မှာစွဲတိုးတက်လာအောင်ကူညီစေခြင်းငှါမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သူကမိဘများတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့သူတို့သားသမီးနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့ သာ. ကောင်း၏။
esteem gambling destroy life
zarchi41 · 3년 전
aniehmar41 · 3년 전
zinnech50 · 3년 전
ngawine41 · 3년 전